कस्ता उम्मेदवार छान्ने ? | Mechikali Daily
कस्ता उम्मेदवार छान्ने ?
Posted By: Mechi Kalion: २४ चैत्र २०७३, बिहीबार १३:५३
झण्डै दुई दशकपछि मुलुकमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । गाउँ, सहरका टोल–टोलमा चुनावी रौनक बढिरहेको छ । सम्भावित उम्मेदवारहरु आ–आफ्नो पक्षमा पार्टीको टिकट पार्न लागिरहेका छन् । मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि बनेका स्थानीय तहमा हुन गैरहेको आसन्न निर्वाचनलाई आम नेपालीहरुले निकै उत्सुकतापूर्वक लिएका छन् । स्थानीय तहका लागि हुन लागेको यो निर्वाचनपछि नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु पाउनेछन् । तुलनात्मक रुपमा स्थानीय निकायमा भन्दा धेरै अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । यसैले शक्ति र स्रोत÷साधनका आधारमा पनि यो निर्वाचनलाई सबैले महत्त्व दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । र, त्यसको आवश्यक तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ । सबै स्थानीय तहलाई आधार बनाएर आयोगले निर्वाचन अधिकृतको पनि टुङ्गो लगाइसकेको छ । वैशाख ३१ गते मुलुकभरका ७ सय ४४ तहमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । यस निर्वाचनबाट कुल ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि निर्वाचन हुनेछन् भने वडा तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
यतिबेला राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना पार्टीका उम्मेदवार छान्न व्यस्त छन् । प्रमुख पार्टीहरुमध्ये केहीले मात्र उम्मेदवार छनौटका आधारहरु तय गरिसकेका छन् । पहिलेका स्थानीय निकायभन्दा भूगोल समेत ठूलो भएकाले स्थानीय तहका निर्वाचन उम्मेदवार छनौट गर्दा पार्टीहरुले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्नेमा कुनै दुई मत छैन । विकास सम्बन्धी प्रष्ट भिजन भएको व्यक्तिले मात्र स्थानीय तहलाई अघि बढाउन सक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका नेताका व्यक्तिगत मान्छे र गुटको भन्दा लोकप्रिय जनमतको छवि भएका उम्मेदवारहरु चयन गर्नुपर्छ ।
मुलुकका सबै पार्टीमा गुटगत प्रभाव छ । स्थानीय चुनावमा पार्टीगत गुटको अन्त्य गरी सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार चयन गर्न सकियो भने त्यसले सुखद् परिणाम ल्याउनेमा कुनै शंका छैन । उम्मेदवारले पनि आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र मात्र होइन विकासको भिजन आममतदाता माझ लैजान सक्नुपर्छ । वास्तवमा जनतालाई यतिबेला चाहिएको भनेको विकास, आर्थिक परिवर्तन र समृद्धि हो । खोक्रा भाषण र सिद्धान्तले जनताको पेट भरिँदैन । यसैले विकासको मोडल प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति अबको स्थानीय निकायमा जानुपर्छ ।
अब सबै कुरा केन्द्रीय सरकारले गरिदेला भन्ने समय गएको छ । स्थानीय निकायलाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ कि त्यसको सही प्रयोग गर्न सकियो भने समृद्धि स्थानीय तहबाटै अघि बढ्न सक्छ । स्थानीय तहबाट परिवर्तनका कामहरु गर्न त्यत्ति बेला संभव हुनेछन् जतिबेला हामीले स्थानीय तहमा योग्य र सक्षम उम्मेदवार पाउनेछौं । यसैले सबै राजनीतिक दलहरुले पुराना, सिनियर, गुटगतभन्दा पनि क्षमतावान्, ऊर्जाशील, जोसजाँगर भएका, नेतृत्व लिन सक्ने, विकासको एजेन्टा बोक्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा कायापलट गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई अघि सार्नु पर्छ । यसमा नै आमनेपाली जनताको हित निहीत छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय खोजौं
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:५९
२२ माघ २०७७, बिहीबार १२:००
बर्डफ्लुको आतङ्क होइन सचेतना फैलाऔं
१९ माघ २०७७, सोमबार ०७:४७
निर्वाचन आयोगको स्थायीत्व लक्षित निर्णय
१३ माघ २०७७, मंगलवार ०८:४९